Kuleylka kuleylka kuleylka iyo birta birta ah ee geedi socodka cinwaanka kulul
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Kuleylka kuleylka kuleylka iyo birta aan lahayn ee ciida kulul
Category: Kuleylka kuleylka Tags: kululaynta birta aan birta ahayn, kululaynta Ti iyo induction SS, Titanium kululaynta, Kuleylka kuleylka iyo birta aan lahayn, HF kululeynta titanium, kululaynta induction, kuleylka kuleylka kuleylka kulul, Wax soosaarka kululaynta induction, kuleylka kuleylka, titanium kululeeyaha induction, Titanium kulul
Joogto ah kululaynta induction titanium iyo silig bir birta ah oo loogu talagalay codsi cinwaan kulul ah
Waxyaabaha: 0.04 "(1.2mm) OD siligga titanium, 0.09" (2.4mm) OD silig bir birta ah
Heerkulka: 700 ºF (371 ºC)
Qalabka • DW-UHF-20kW nidaamka kuleylka kuleylka, oo ku qalabeysan mashiinka shaqada fog oo ka kooban hal koronto 0.5µF.
• An kululaynta kuleylka induction loogu talagalay oo loo diyaariyey gaar ahaan codsigan.
Wareeg afar wareeg ah oo xarig ah oo leh 20 "(50.8cm) busswork ayaa loo isticmaalaa si joogto ah loogu kululeeyo siligga. Fiiladu waxay ku socotaa xarkaha xaddiga 95 qaybood daqiiqaddii, iyadoo la ilaalinayo heerkulka joogtada ah ee 700 ºF (371 ºC) kahor cinwaanka kulul.
Sheeko • 20 "(50.8cm) busswork ayaa loo baahan yahay sababtoo ah meesha ay ku socoto nidaamka otomaatiga ah. Macaamiilku hadda wuxuu adeegsadaa qalabka DW-UHF oo wuxuu cusbooneysiinayaa qalabkooda hadda. Waxay u doorteen HLQ waayo aragnimadooda hore ee HLQ qalabka kululaynta induction iyo taageerada.
• Kulayl joogto ah oo la xakamayn karo